E-Cigarettes or Vape ကိုသောက်တာဟာမှန်ရဲ့လား…? - YTV
Home » Blogs » E-Cigarettes or Vape ကိုသောက်တာဟာမှန်ရဲ့လား…?
Blogs September 12, 2020 12:01 pm
သင်က ဆေးလိပ်ဖြတ်ချင်နေတဲ့သူလား…?ဒါဆိုရင်တော့ အရင်ဆုံး ဆေးလိပ်ဖြတ်ချင်တာက သင်တစ်ယောက်ထဲ မဟုတ်ပါဘူးလို့ ပြောပါရစေ…ကမ္ဘာပေါ်က ဆေးလိပ်သောက်သူတွေရဲ့ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာ ဆေးလိပ်ဖြတ်ချင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်…
ဆေးလိပ်သောက်တာဟာ သင့် ခန္တာကိုယ် တစ်ခုလုံးကို ဆိုးဆိုးရွားရွား ထိခိုက်စေပါတယ်…
တကယ်တော့ ဆေးလိပ်ဖြတ်တာဟာ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် သင်လုပ်နိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံး အရာတစ်ခုပါ…
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ နှလုံးရောဂါသည်တွေကို သုံးပုံ ပုံလိုက်ရင် တစ်ပုံစာနှလုံးရောဂါသည်တွေက ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း နဲ့ ဆေးလိပ်ငွေ့ကို ရှုမိတာကြောင့် နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားရတာ ဖြစ်ပါတယ်…
ဒီနေရာမှာ အယူမှားနေတာ တစ်ခုပြောပြချင်ပါတယ်…
အဲ့ဒါကတော့ E-Cigarettes (or) Vape ကို ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့အတွက် အစားထိုးသောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်…
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ မှာ E-Cigarettes (or) Vape ကို ဆေးလိပ်အစားထိုး သောက်နေကြတဲ့ သူတွေ တော်တော်များပါတယ်…
ဒီတော့ E-Cigarettes (or) Vape သောက်ခြင်းက ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့အတွက် တကယ်ပဲအရေးပါနေသလား…? ဒါမှမဟုတ် ကျန်းမာရေးကို ဆေးလိပ်သောက်တာထက် ပိုသက်သာစေပါ့မလား…? ဆိုတာ ဆက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်…
Vape သောက်တာက ကျန်းမာရေးအတွက် ဘာတွေထိခိုက်စေသလဲ ဆိုတာကို “Johns Hopkins Ciccarone” နှလုံးရောဂါကာကွယ်ရေး က သုတေသန ဒါရိုက်တာ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ “Michael Blaha, M.D., M.P.H.”က အခုလို ဝေမျှထားပါတယ်…
၁. Vape သောက်တာက ဆေးလိပ်သောက်တာထက် ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေနည်းတယ်ဆိုပေမယ့် သိပ်မထူးခြားနားပါပဲ…
တကယ်တော့ E-Cigarettes (or) Vape ဆိုတာ ဆေးရွက်ကြီးကရလာတဲ့ နီကိုတင်းကို အနံ့နဲ့ တခြား ဓာတုဓာတ်ပေါင်းများစွာကို ပေါင်းစပ်ပြီး အငွေ့ထွက်လာအောင် အသေးစားမီးဖို့တစ်ခုနဲ့ တူတဲ့ လျှပ်စစ်ကွိုင်ပေါ်မှာ ဖြတ်သန်းစေပြီး ရှုသွင်းရတာဖြစ်ပါတယ်…
ပုံမှန်ဆေးလိပ်တစ်လိပ်မှာ လူကို ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ ဓာတုဗေဒဓာတ်ပေါင်း၇၀၀၀ကျော် ပါဝင်ပါတယ်…
E-Cigarettes (or) Vape မှာ ဘယ်လို ဓာတုဗေဒဓာတ်ပေါင်းတွေပါဝင်နေမလဲ ဆိုတာကို ကျနော်တို့ မသိနိုင်ပေမယ့် နှလုံးရောဂါကာကွယ်ရေး က သုတေသန ဒါရိုက်တာ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာ “Michael Blaha” ကတော့ “E-Cigarettes (or) Vape ထဲမှာပါတဲ့ ဓာတုဗေဒဓာတ်ပေါင်းတွေမှာ လူကို အကျိုးပြုနိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုမှာ မပါဘူး”လို့ ပြောထားပါတယ်…
နှလုံးရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးဌာန (CDC) ရဲ့ စစ်တမ်းအရ E-Cigarettes (or) Vapeသောက်ခြင်း ကဖြစ်လာတဲ့ အဆုတ်ရောဂါ (EVALI) ကြောင့် လူသေဆုံးမှု ဟာ ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီလ ၂၁ရက်နေ့အထိ ဆိုရင် လူပေါင်း ၆၀ ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်…
ဒီ အဆုတ်ရောဂါ (EVALI) ဟာဆိုရင် E-Cigarettes (or) Vape တွေကို ပြုပြင်သောက်သုံးတာ (သို့မဟုတ်) E-Cigarettes (or) Vape ထဲမှာ ထည့်သွင်းထားတဲ့ အရည်ကို Tetrahydrocannabinol (THC) ပါဝင်အောင် ပြုပြင်ပြီးသောက်သုံးတဲ့ သူတွေမှာအဖြစ်များပါတယ်…
ဒါတွေကြောင့် နှလုံးရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးဌာန (CDC) ကနေ E-Cigarettes (or) Vape နဲ့ပတ်သတ်ပြီး အခုလို ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်…
Tetrahydrocannabinol (THC) ပါဝင်တဲ့ E-Cigarettes (or) Vape ထုတ်ကုန်တွေကို အသုံးမပြုရ။
E-Cigarettes (or) Vape ကို အာမခံမရှိတဲ့ နေရာတွေက နေ ဝယ်ယူ အသုံးပြုခြင်းကနေ ရှောင်ကြဉ်ရန်။
E-Cigarettes (or) Vape ကို မိမိဘာသာ ပြုပြင်သောက်သုံးခြင်းကနေ ရှောင်ကြဉ်ရန်။
E-Cigarettes (or) Vape တွေကို သောက်သုံးတော့မယ်ဆိုရင် ဒီသုံးချက်ကို သတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်…
(၂) E-Cigarettes (or) Vape က သင့်ရဲ့ နှလုံးနဲ့ အဆုတ်ကို ဘယ်လိုအကျိုးပြုသလဲ…?
“နီကိုတင်း” ဟာဆိုရင် ဆေးလိပ်နဲ့ E- E-Cigarettes (or) Vape တွေမှာ အဓိက ပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး သောက်မိတဲ့ သူကို စွဲလမ်းစေပါတယ်…
အဲ့ဒီ “နီကိုတင်း”ဓာတ်ဟာ ဆေးလိပ်သောက်ချင်စိတ်ကို ပြင်းပြစေပြီ ဆေးလိပ်သောက်ချင်တဲ့ အချိန်မှာ မသောက်ပဲ ထိန်းချုပ်ထားပါက မူးယစ်ဆေးစွဲသလို စိတ်ကို ကယောင်ခြောက်ခြားဖြစ်စေပါတယ်…
ဒါ့အပြင် “နီကိုတင်း” ဟာ နှလုံးခုန်နှုန်းကို မြင့်တက်စေတဲ့အဆိပ်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး နှလုံးရဲ့အလုပ်ကို ထိခိုက်စေပါတယ်…
နီကိုတင်း များများသောက်မိလေလေ နှလုံးရောဂါကို ဖြစ်ပွားဖို့ နီးစပ်လေလေဖြစ်ပါတယ်…
ဒါဟာ အသက်ကြီးတာငယ်တာနဲ့ မဆိုင်ပဲ “နီကိုတင်း” ရဲ့ အဆိပ်ကို သောက်သုံးမိတဲ့ လူကြီးလူငယ်မရွေးဟာ နှလုံးရောဂါကို လက်ယက်ခေါ်နေသလိုပါပဲ…
ဒါဆိုရင် E- E-Cigarettes (or) Vape သောက်သုံးခြင်းဟာ သင့်အတွက် အဆိုးတွေချည်ပဲဖြစ်နေပါပြီ…
ဒါတင်မကသေးပဲ E- E-Cigarettes (or) Vape သောက်သုံးခြင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ မသိသေးတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေအများကြီးရှိနေသေးတာဖြစ်ပြီး ရေရှည်မှာ လူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လောက်ထိခိုက်စေမလဲ ဆိုတာကို လေ့လာနေဆဲဖြစ်ပါတယ်…
လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ E- E-Cigarettes (or) Vape သောက်သုံးခြင်းဟာ နာတာရှည်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါနဲ့ နှလုံးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ရောဂါတွေကို ဖြစ်ပွားစေပါတယ်…
ဒါကြောင့် E- E-Cigarettes (or) Vape သောက်သုံးခြင်း ဟာ ကျန်းမာရေး အတွက် ဆိုးရွားစေတယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ နားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်…
(၃) E- E-Cigarettes (or) Vape သောက်သုံးခြင်း ဟာ မူးယစ်ဆေးစွဲသလို စွဲစေနိုင်ပါတယ်…
E- E-Cigarettes (or) Vape တွေထဲမှာ “နီကိုတင်း” ပါဝင်ပါတယ်…
နှလုံးရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးဌာန (CDC) ရဲ့သုတေသန တွေအရ E- E-Cigarettes (or) Vape သောက်သုံးခြင်းဟာ ဘိန်းစွဲ သလိုစွဲစေနိုင်ပါတယ်…ပိုပြီးဆိုးစေတာက E- E-Cigarettes (or) Vape ထုတ်ကုန်တွေမှာပါတဲ့ “နီကိုတင်း” ပါဝင်မှု ဟာ ဆေးရွက်ကြီးထုတ်ကုန်တွေမှာ ပါဝင်တဲ့ “နီကိုတင်း”ပမာဏထက်ပိုပြီးများနေတာဖြစ်ပါတယ်…
(၄) E- E-Cigarettes (or) Vape သောက်သုံးခြင်း ဟာ ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမဟုတ်ပါဘူး…
ကျွန်တော် တို့ ဒီဘက်ခေတ်ရဲ့ E- E-Cigarettes (or) Vape ကြော်ငြာ အများစုမှာ ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် လိမ်လည် နေကြပါတယ်…
တကယ်တော့ E- E-Cigarettes (or) Vape ဟာ အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှု (FDA) ရဲ့ တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်မရရှိသေးပါဘူး…
မကြာသေးခင်က လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ E- E-Cigarettes (or) Vape သောက်သုံးခြင်းဟာ ဆေးလိပ်ပြတ်စေတာမဟုတ်ဘဲ “နီကိုတင်း” ကိုသာ ပိုမိုစွဲလမ်းစေတာဖြစ်ပါတယ်…
နှလုံးရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးဌာန (CDC) ကတော့ E- E-Cigarettes (or) Vape သောက်သုံးခြင်းဟာ အဆုတ်ရောဂါ (EVALI) ကို ဖြစ်စေတာကြောင့် ဆေးလိပ်ဖြတ်မယ်ဆိုရင် အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှု (FDA) ကနေ တရားဝင်ညွှန်ကြားထားတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြုဖို့ အကြံပေးညွှန်ပြထားပါတယ်…
(၅) E- E-Cigarettes (or) Vape ဟာ ခေတ်မှီ “နီကိုတင်း”ထုတ်ကုန်တစ်ခုလား…?
ယနေ့ခေတ် လူငယ်တွေကြား မှာ E- E-Cigarettes (or) Vape ကို အရင်က ဆေးရွက်ကြီးထုတ်ကုန်ဖြစ်တဲ့ ဆေးလိပ် ထက်လူကြိုက်များနေတာဖြစ်ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း လူငယ်တွေကြားမှာ E- E-Cigarettes (or) Vape ကို အသုံးပြုမှုဟာ ၉၀% အထိ များပြားလာပါတယ်…
ဒီအထဲမှာမှ ၄၀% သောသူတွေဟာ ဆေးလိပ်မသောက်တက်တဲ့ သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်…
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဟာ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါနဲ့ ကင်ဆာရောဂါ တို့ကြားက အဓိက ဆက်သွယ်နေတဲ့ အရာဖြစ်ပါတယ်…
E- E-Cigarettes (or) Vape သောက်သုံးခြင်း နဲ့ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဟာ နီကိုတင်း ကို စွဲလမ်းစေပါတယ်…
ဒါကြောင့် ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့အတွက် E- E-Cigarettes (or) Vape သောက်သုံးခြင်း ဟာ မထူးခြားတဲ့ လမ်းစဉ်ဖြစ်ပြီး တကယ် ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်ကတော့ သင့်ဆရာဝန် ရဲ့တိုင်ပင်ပြီး ပြုလုပ်တာက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်…
ကဲ…ဒီတော့ ကျန်းမာရေးအတွက် အဆိပ် ဖြစ်စေတဲ့ “နီကိုတင်း” ကို သုံးစွဲခြင်းကနေ ရပ်တန့်ဖို့ အခုပဲ စတင်လိုက်ကြပါစို့…